Otu esi emepụta ndepụta ndọpụta na Excel dị mfe na ngwa ngwa - Nduzi Teknụzụ | Nzukọ Ekwentị
Ụlọ Ignatius | | Microsoft Excel, Autlọ ọrụ akpaaka
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka mpempe akwụkwọ, anyị ga-ekwu maka Excel, ngwa nke rutere n'ahịa na 1985, mana ọ ghọghị ihe edere n'ahịa ahụ ruo 1993, mgbe ọ karịrị Lotus-1-2-3 pụrụ ime ihe niile. Taa Excel bụ jikọtara ọnụ na nke enweghị ike ịbanye na Office 365.
Kemgbe ọtụtụ afọ, Excel ka mma, na-enye ọtụtụ ọnụọgụ, ihe ngwọta maka ụlọ ọrụ na ndị mmadụ n'otu n'otu. Otu ọrụ ọ na-enye anyị, maka ndị ọrụ na ụlọ ọrụ, bụ ohere kee ndenye ndepụta, a bara uru na ọrụ anyị na-akụzi na-esote.
Excel dị maka Windows na macOS na site na Weebụ, na nsụgharị zuru ezu. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na anyị nwere nsụgharị maka ngwaọrụ mkpanaka, nke a o zughi ezu dị ka nke anyị nwere ike ịhụ na desktọọpụ nsụgharị. Nzọụkwụ ị ga - eso iji mepụta ndepụta ndọpụta na Excel bụ otu na Windows, macOS na site na nsụgharị Weebụ.
Ọ bụ ezie na enwere ike ịmepụta ha naanị site na nsụgharị desktọọpụ nke Excel, ndị a enwere ike ịjụ ha ma mekọrịta ha na ụdị Excel ọ bụla, gụnyere mbipụta belatara nke Microsoft na-enye anyị site na ngwa Office maka ngwaọrụ mkpanaka, ngwa anaghị akwụ ụgwọ kpamkpam.
1 Gịnị bụ ndọpụta ndepụta
2 Otu esi emepụta ndepụta ala na Excel
2.1 Mepụta isi data
2.2 Mepụta ndepụta ndepụta
Gịnị bụ ndọpụta ndepụta
Ndepụta ndọpụta, na-enye anyị ohere họrọ site na ndepụta nhọrọ naanị otu nhọrọ, ewepu ndị ọzọ. Typedị ndepụta a na-enye anyị ohere iji ụkpụrụ ndabara na-ezere ntinye nke data ezighi ezi ma ọ bụ na mmejọ okwu (nke na-enye anyị ohere ịme ihe nzacha nyocha).
Na ụlọ ọrụ, ndepụta ndị a na-enye gị ohere ịhazi na ijikwa ọrụ na njikwa gị kwa ụbọchị n'ụzọ dị irè karị, yana ịnye mmetụ ọkachamara na-adịghị ewute gị. Ọnụ ọgụgụ nke ndepụta ndọpụta anyị nwere ike ịmepụta enweghị njedebe, yabụ anyị nwere ike ịmepụta igbe ndepụta maka mkpụrụ ndụ nke ọ bụla na mpempe akwụkwọ.
Typesdị ndepụta ndị a bara ezigbo uru mgbe ị na-emepụta akwụkwọ ọnụahịa (ebe echiche nke ọ bụla dị iche na nke gara aga), soro nleta, mepụta ọdụ data iji tinye ihe nzacha omenala nke ahụ na-enye anyị ohere ịchịkwa ebuka n'ụlọ nkwakọba ihe ... Ọ bụrụ na ị ruru isiokwu a, o yikarịrị ka ị doro anya banyere ojiji ị bu n'obi inye ọrụ Excel a dị egwu.
Otu esi emepụta ndepụta ala na Excel
Ndepụta ndọpụta na-enweta data na tebụl ndị anyị ga-emerịrị iji mepụta dị ka isi mmalite. Ọ bụrụ na ebumnuche mpempe akwụkwọ anyị chọrọ ịmepụta ndepụta ndọpụta bụ ibipụta ya, anyị ga-emerịrị tọọ data isi na mpempe akwụkwọ ọzọ, mpempe akwụkwọ anyị nwere ike ịkpọ Data.
Dịka m kwuru n'elu, n'otu mpempe akwụkwọ ahụ anyị nwere ike ịmepụta listi ndọpụta na-enweghị ngwụcha, yabụ ọ bụrụ na anyị achọghị ịmepụta mpempe akwụkwọ maka isi data data ọ bụla, anyị nwere ike iji otu mpempe akwụkwọ ahụ, na-ewepu data anyị jere ozi dị ka isi mmalite maka ndepụta anyị mepụtara. Ozugbo anyị doro anya banyere otu ha si arụ ọrụ, anyị na-egosi gị usoro ị ga-eso mepụta listi wedaa na Excel.
Mepụta isi data
Ihe mbu anyi gha eme bu ime data, data ejiri meputa ndetuta. Ọ bụrụ na anyị emebeghị data a mbụ, ndepụta ndọpụta ha agaghị enwe ihe ha ga-egosi. Iji mepụta ebe data, anyị mepee mpempe akwụkwọ ọhụrụ na Excel, pịa ugboro abụọ na aha anyị ga-akpọ ya Data.
Ka anyị wee ghara itinye aka na nke bụ isi mmalite data nke ndepụta ọ bụla anyị chọrọ ịmepụta, anyị ga-ede dị ka uru mbụ aha ndepụta ahụ, ma ọ bụ obodo, ụdị, mba, uwe ... Ọ bụrụ na naanị anyị ga - emepụta ndepụta, ọ dịghị mkpa ide aha ahụ na cell mbụ.
Ọzọ, anyị ga-ede nhọrọ niile anyị chọrọ na-egosipụta na ndọpụta ndepụta, otu dị n'okpuru nke ọzọ na kọlụm ahụ iji mee ka ọ dị mfe ịhọrọ isi iyi nke data ahụ. Ozugbo anyị mepụtara isi data, anyị nwere ike ịmepụta listi ndọpụta.
Mepụta ndepụta ndepụta
Nke mbụ anyị na-ahọrọ mkpụrụ ndụ ebe anyi choro ka anyi gosiputa ndepụta ihe.
Na-esote, pịa na data nhọrọ (abụghị mpempe akwụkwọ) na rịbọn. N'ime nhọrọ, pịa Nkwado data.
N'ime nhazi taabụ> Usoro nkwado> Kwe ka anyị họrọ Lista.
Ọzọ anyị ga-aga igbe mmalite wee pịa akara ngosi dị na njedebe nke igbe ahụ họrọ oke sel ebe data di.
Na-esote, pịa na data mpempe akwụkwọ na anyị na-ahọrọ ọnụọgụ nke sel ebe data dị, na-ahapụ aha cell nke nyere anyị ohere ịchọpụta data a. Ozugbo anyị họpụtara usoro data, anyị pịa Tinye.
Anyị emeelarị ndepụta mbụ anyị dị na mpempe akwụkwọ Excel. Na sel niile anyị họpụtara iji gosi ndepụta ndepụta, adapụta ugbu a na akụ na -edata ala ka anyị pịa họrọ niile nhọrọ na anyị guzobere na mbụ na mpempe data.
Ozugbo anyị mepụtara ndepụta ndọpụta mbụ, anyị ga- emerịrị mee otu usoro imepụta ihe ndi ozo di iche iche a choro ma obu choro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Autlọ ọrụ akpaaka » Microsoft Excel » Esi eme ka ndepụta ndepụta na Excel
Okwuntughe siri ike: ndụmọdụ ị kwesịrị ịgbaso